Booliska Maraykanka oo ku Raad Jooga Jwxo-shiil, oo Maraykanka Joogaa – Rasaasa News
Booliska Maraykanka oo ku Raad Jooga Jwxo-shiil, oo Maraykanka Joogaa
Jun 29, 2010 Booliska Maraykanka oo ku Raad Jooga Jwxo-shiil, ethiopia, Ogaden, ONLF, oo Maraykanka Joogaa, Somali
Jwxo-shiil iyo Abtidoon oo dhuumasho ku tagay dalka Maraykanka, ayaa waxaa ku socota dacwad ka dhan ah Jwxo-shiil oo ay soo abaabuleen qaar ka mid dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo sheegay in ay hayaan markhaatiyo iyo cadaymo in Jwxo-shiil uu laayey dad ehelkood ah.
Dalka Maraykanka ayuuna joogi karin ruux dambi galay ama loo haysto meesha uu doono dambiga ha ku soo galee. Waxaana dalka Marakanka kaliya oo aad u baahan tahay in aad hayso cadaymo ama markhaati mid uun si aad dacdaw ugu oogto ruuxa dambiga aad u haysato.
Jwxo-shiil, oo loo haysto in ka badan 30 dambi oo kuligood dil ah, ayey meelo badan dacwado kaga socdaan kol la qaban doonaba. Waxaadse moodaa in uuna maanta ka baxsandoonin midan Maraykanka kaga oogan oo ay wadaan ehelada dadkii uu sida khaldan ugu dilay meelo kala duwan.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa ugu xoog badan kiisaska loo haysto Jwxo-shiil, xasuuqii Cobale ee 2005 oo uu ku xasuuqay dad ka badan 60 ruux oo jinfo qudh ah iyo waliba dilkii Dr. M S Dolal, oo uu sanadkii 2009 si qarsoodi ah ugu dilay degaanka Elale oo ka tirsan gabalka Shabeele, xili uu booqanayey cwxo ee halkaas ku sugan. Waxaa kale oo ka mid ah dacwadaha loo haysti Jwxo-shiil, dilkii ugu dambeeyey Liqoowe Muxumed Tayse oo dhawaan lagu Dhafooriyey magaalada Qabridahare, markhaatina loogu hayo xaashi uu isagu qoray iyo dadkii uu u qoray.
Ehelada Dr. M S Dolal ayaa iyagu dacwada u haysta afartan ruux Jwxo-shiil, Abtidoonba, Ina-dhuubo iyo Qaaxo dilkii qarsoonaa ee lagu dilay Dr. Dolal, jecelkana in ay hor keenaan sharciga meel kasta oo ay joogaanba.
Jwxo-shiil iyo Abtidoon oo u turjumaya, balse eega uu ku hoos wado Gacma dheere oo uu Jwxo-shiil adeer u yahay, ayaa sida wararku ay sheegayaan waxay Maraykanka u tageen in
Donald Payne oo ah nin qaba haweenay xabashi ah, in uu u geeyo wiil asalkiisu xabashi yahay oo Maraykan ah, madaxna ka ah xafiiska arimaha khuseeya Itobiya. Waxaana ay rabaan baa la yidhi in loo baryo Meles ka dib kolkii ay dhawr goor oo hore codsi ay u gaysteen safaarada xabashida ee Sweden lagu soo celiyey.
Warar hoose ayaa cadaynaya in Jwxo-shiil, uu insaarxo wareersan yahay ka dib kolkii uu wax uusan filayn uu foolkaano ku noday. Dhinacii arimaha dibada iyo waliba tii gudaha ayaa waxaa kaga dheereeyey garabka ay ishayaan ee uu hogaamiyo xiligan Salaxudin, ka dib kolkii uu heshiis la gaadhay dawlada Itobiya.
Jwxo-shiil, ayey suurto gal tahay in lagu xidho cariga Maraykanka, inta uu doonayo hawlo uu ka dib dhacay iyo heshiis xabasheed.